ဒူဒူကြီး: August 2013
'PSC Inspection' ဆိုတဲ့ 'Port State Control Inspection' ဆိုတာကတော့ သဘေ်ာရောက်ရှိရာ ဆိပ်ကမ်းရဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းမှ၊ သဘေ်ာအား စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သဘေ်ာပေါါမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ရေယာဉ်မှူး အပါအဝင်၊ အရာရှိတွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် certificate of competency များကို၊ verifying အနေနဲ့ မှန်ကန်မှုရှိမရှိ၊ စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း၊ သဘေ်ာရဲ့ အခြေအနေ condition of the ship နဲ့ တတ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့၊ စက်ပစ္စည်း၊ ကရိယာ၊ equipments တွေဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက် international conventions တွေအရ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ SOLAS, MARPOL, STCW အစရှိတဲ့ နည်းဥပဒေ regulations တွေနဲ့ compliance အဖြစ်၊ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ သဘေ်ာကို manned and operated အနေနဲ့ စီမံခန့်ခွဲပြီး မောင်းနှင်အသုံးပြုရာမှာ၊ ကျင့်သုံးရမယ့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ applicable international law တွေကို၊ လိုက်နာခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
(၁၉၇၈) ခုနှစ်မှာ၊ ဥရောပတိုင်းပြည်တွေဟာ၊ သဘေ်ာသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေး labour conditions တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ ILO ဆိုတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေအတိုင်း၊ accordance အနေနဲ့ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ရှိမရှိ၊ audit အဖြစ် အပြန်အလှန်စစ်ဆေးရန်၊ သဘောတူခဲ့ပြီး၊ Netherlands နိုင်ငံ The Hague မြို့မှာ၊ အသိအမှတ်ပြု သဘောတူညီချက် 'memorandum' ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီနှစ်မှာပဲ 'Amoco Cadiz' ဆိုတဲ့ ရေနံတင်သဘေ်ာ နစ်မြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်၊ safety and pollution ဆိုတဲ့ ဘေးအန္ထရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု တားဆီးရေးကိစ္စတွေကိုပါ၊ အပြန်အလှန်စစ်ဆေးရန် 'The Hague memorandum' မှာ၊ ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၈၂) ခုနှစ်မှာတော့ port state control inspection ဆိုင်ရာ၊ Paris MoU တနည်းအားဖြင့် Paris Memorandum of Understanding ကို၊ ဥရောပ (၂၆) နိုင်ငံနဲ့ Canada နိုင်ငံတို့က၊ လက်ခံ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ သဘေ်ာမှတ်ပုံတင်ထားရာတိုင်းပြည် flag state မှ ပြဌာန်းချက်တွေ တနည်းအားဖြင့် flags of convenience တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း failure တွေနဲ့ flags of convenience အရ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေမယ့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းခရီးကို သွားလာရာမှာ၊ international conventions တွေအရ၊ သဘောတူ သတ်မှတ်ထားတဲ့ SOLAS, MARPOL, STCW အစရှိတဲ့ နည်းဥပဒေ regulations တွေကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှု compliance မရှိခြင်း ကို၊ port state control inspection အနေနဲ့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါက၊ သဘေ်ာမှ၊ ပြုပြင်ခြင်း rectification အား၊ ဆောင်ရွက်ပြီး၊ classification societies အနေနဲ့ survey and certification duties အဖြစ်၊ 'ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်း' ဖြင့်၊ အတည်ပြုပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။
'Port state control agreements' - Paris MoU ရဲ့ နောက်မှာတော့၊ ဒေသဆိုင်ရာ regional MOUs တွေအဖြစ်၊ Pacific Ocean region ဒေသအတွက် Tokyo MOU , South and Central America region အတွက် Acuerdo Latino or Acuerdo de Viña del Mar, Caribbean ဒေသအတွက် Caribbean MoU, မြေထဲပင်လယ်ဒေသအတွက် Mediterranean MoU, အိန္နိယသမုဒ္ဒရာဒေသအတွက် Indian Ocean MoU, West and Central Africa အတွက် Abuja MoU, ပင်လယ်နက်ဒေသအတွက် Black Sea MoU နဲ့ Persian Gulf အတွက် Riyadh MoU တို့ကို၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်တွေမှ၊ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။
Tokyo MoU ကို၊ Australia, Canada, Chile, China, Fiji, Hong Kong(China), Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, The Philippines, The Russian Federation, Singapore, Thailand, Vanuatu နဲ့ Vietnam အစရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း (၁၈) နိုင်ငံမှ၊ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။ Acuerdo Latino or Acuerdo de Viña del Mar သို့မဟုတ် Acuerdo de Viña del Mar Agreement လို့ခေါါတဲ့ The Latin American Agreement on Port State Control of Vessels ကိုတော့၊ Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Honduras, Mexico, Panama, Peru, Uruguay နဲ့ Venezuela အစရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း (၁၃) နိုင်ငံမှ၊ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။
Caribbean MoU ကို၊ Antigua & Barbuda, Aruba, the Bahamas, Barbados, Belize, the Cayman Islands, Curaçao, Cuba, Grenada, Guyana, Jamaica, the Netherlands, St. Kitts and Nevis, Suriname နဲ့ Trinidad and Tobago အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှ၊ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး၊ Mediterranean MOU သို့မဟုတ် Mediterranean MoU on PSC ကိုတော့၊ Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Malta, Morocco, Tunisia နဲ့ Turkey Venezuela အစရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း (၁၀) နိုင်ငံမှ၊ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။
Paris MoU အရ၊ 'PSC Inspection' ဆိုတဲ့ 'Port State Control Inspection' အဖြစ်၊ သဘေ်ာရောက်ရှိရာ ဆိပ်ကမ်းရဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေမှ၊ သဘေ်ာတွေကို၊ စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ၊ (၂၀၀၇) ခုနှစ်အတွင်း၊ deficiencies ဆိုတဲ့ ချို့ယွင်းချက်ပေါင်း၊ (၇၄, ၇၁၃) ခုတွေ့ရှိခဲ့သလို၊ detentions အနေနဲ့ သဘေ်ာကို ထိမ်းသိမ်းအရေးယူမှုပေါင်း (၁၂, ၅၀) ခုခန့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့၊ မှတ်တမ်းများအရ သိရပါတယ်။
အလားတူ Indian Ocean MoU ကို၊ Australia, Bangladesh, Djibouti, Eritrea, France(La Reunion Island), India, Iran, Kenya, Maldives, Mauritius, Mozambique, Myanmar, Oman, Seychelles, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Tanzania နဲ့ Yemen အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှ၊ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး၊ Abuja MoU ဆိုတဲ့ West and Central Africa MoU ကိုတော့ Angola, Benin, Cameroon, Cape Verde, Congo, Cote d’ Ivoire, Gabon, Ghana, Guinea, Equatorial Guinea, Liberia, Mauritania, Namibia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, South Africa, São Tomé and Príncipe, Democratic Republic of Congo, Guinea Bissau, The Gambia နဲ့ Togo အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှ၊ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။
ပင်လယ်နက်ဒေသအတွက် Black Sea MoU ဆိုတဲ့ Black Sea Memorandum of Understanding on Port State Control ကိုတော့ Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey နဲ့ Ukraine အစရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း (၆) နိုင်ငံမှ၊ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသလို၊ Persian Gulf အတွက် Riyadh MoU ကို Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia နဲ့ UAE အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှ၊ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့ မည်သည့် MoU ကိုမှ၊ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်း မရှိသလို၊ United States waters ဆိုတဲ့ အမေရိကန်ရေပိုင်နက်အတွင်း၊ ဝင်ရောက် သွားလာမယ့် ကုန်သွယ်ရေကြောင်း သဘေ်ာတွေဟာ၊ international conventions တွေအရ၊ သဘောတူ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နည်းဥပဒေ regulations တွေနဲ့ applicable U.S. laws ဆိုတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို၊ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှု ရှိမရှိနဲ့ ကျင့်သုံးမှု ရှိမရှိအား၊ ' United States Coast Guard' မှ၊ စစ်ဆေးစေပါတယ်။
'Detention of ship under Port State Control' - deficiencies တွေကို၊ minor infractions တနည်းအားဖြင့် ပြဌာန်းချက်အတိုင်း၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့ ပျက်ကွက်မှုအသေးစား minor violation သို့မဟုတ် minor infringement ofalaw အဖြစ်၊ သတ်မှတ်ခဲ့လျှင် ပြုပြင်အရေးယူခြင်းအား၊ သဘေ်ာမှ တာဝန်ရှိသူများက၊ (၁၄) ရက်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ပြုပြင်အရေးယူခြင်း rectification အား၊ ချက်ခြင်းမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ under specific conditions အဖြစ်၊ သတ်မှတ်ခဲ့လျှင်၊ သဘေ်ာထွက်ခွာသွားပြီး နောက်ထပ် ဆိုက်ကပ်မယ့် ship arrives at the next port ဆိပ်ကမ်းမှာ၊ ဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် port state inspection စစ်ဆေးခြင်းခံရတဲ့ သဘေ်ာရောက်ရှိ ဆိုက်ကပ်ရာ ဆိပ်ကမ်းမှတင်၊ သဘေ်ာ မထွက်ခွာခင် ပြုပြင်အရေးယူခြင်း rectification အား၊ ဆောင်ရွက်ပေးရန် သတ်မှတ်ထားသလို၊ အကယ်၍ အရေးကြီးတဲ့ major infractions အဖြစ်၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါက၊ detentions အဖြစ်၊ သဘေ်ာကို ထွက်ခွာခွင့်မပေးပဲ၊ ထိမ်းသိမ်းအရေးယူမှုအား ချက်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
'Paris MoU NIR' - Paris MoU New Inspection Regime ဟာ၊ recently-implemented system အဖြစ်၊ (၂၀၁၁) ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ၊ စတင်ကာ၊ လက်ရှိကျင့်သုံးနေကြတဲ့ သဘေ်ာရောက်ရှိရာ ဆိပ်ကမ်းရဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းမှ၊ သဘေ်ာအား စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ စစ်ဆေးမှုကို vessel's risk profile ဆိုတဲ့ ဘေးအန္ထရာယ် ဖြစ်ပေါါနိုင်မှု အခြေအနေအား၊ အခြေခံကာ ကာလအပိုင်းအခြား frequency အလိုက်၊ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ risk profiles အား၊ နောက်ဆုံးစစ်ဆေးခဲ့စဉ်မှ၊ တွေ့ရှိမှုရလဒ် previous inspection results, သဘေ်ာကို ထွက်ခွာခွင့်မပေးပဲ၊ ထိမ်းသိမ်းအရေးယူခြင်း ခံရမှုအရည်အတွက် number of detentions, သဘေ်ာကို စီမံခန့်ခွဲနေသူတွေရဲ့ အရည်အသွေး management company performance, သဘေ်ာမှတ်ပုံတင်ထားရှိရာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေ flag state performance နဲ့ သက်သေခံလက်မှတ် statutory certificate ထုတ်ပေးထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အနေအထား classification society performance တို့ကို၊ အခြေခံကာ low, medium နဲ့ high ရယ်လို့ ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Paris MoU NIR ကို၊ လက်ခံသဘောတူထားတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovenia, Spain, Sweden နဲ့ United Kingdom တို့ဖြစ်ပြီး၊ စုစုပေါင်း (၂၇) နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။ Paris MOU ကို၊ လက်ခံသဘောတူထားတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ ဆိပ်ကမ်းတွေကို၊ သဘေ်ာဝင်ရောက်ဆိုက်ကပ်လျှင်၊ pre-arrival reporting obligations အနေနဲ့ ကြိုတင်အကြောင်းကြားရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။
pre-arrival reporting obligations ကို၊ (၇၂) နာရီကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းနဲ့ (၂၄) နာရီကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်း ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ expanded inspection အဖြစ်၊ အစစ်ဆေးခံရန် (၇၂) နာရီကြိုတင် အကြောင်းကြားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
Reference and image credit to : "Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region", as amended 20 November 2008. Available from: http://www.tokyo-mou.org/ ., "Latin American Agreement on Port State Control of Vessels (Viña del Mar, 1992)", as amended 2008. Available from: http://www.acuerdolatino.int.ar/ ., "Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control", 1996. Available from: http://www.caribbeanmou.org., "Memorandum of Understanding on Port State Control in the Mediterranean Region", as amended 27 November 2006. Available from: http://www.medmou.org., "Indian Ocean Memorandum of Understanding on Port State Control", as amended October 2003. Available from: http://www.iomou.org., "Memorandum of Understanding on Port State Control for the West & Central African Region", 30 October 1998. Available from: http://www.abujamou.org., "Black Sea Memorandum of Understanding on Port State Control", as amended 01 January 2006. Available from: http://www.bsmou.org., "Riyadh Memorandum of Understanding on Port State Control in the Gulf Region", June 2005. Available from: http://www.riyadhmou.org/., Paris Mou (2007), "Deficiencies per major category", Annual Report 2007 - Paris MoU on Port State Control, Month Date, pp.22-23., Özçayir, Z.O. (2004), "Practical Implication of Port State Control: The Contractual Effect of Port State Control Detentions". In Mitropoulos, E.E. Port State Control, 2nd ed, LLP, London, pp.509, 520-521., Taylor v Caldwell  122 ER 309, Owen, T. (2009), "Contract Law Concept", [LGT4016] Maritime Law Lecture Note, p.61., Texas Company v. Hogarth Shipping Corp (1921) 256 U.S. 619, Jackson v Union Marine Insurance Co (1874) L.R. 10 C.P. 125., Paris Mou (2009), The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control. Deficiencies, detentions and rectifications. Available from: http://www.parismou.org/ParisMOU/Organisation/About+Us/Detention/xp/menu.3961/default.aspx [Accessed: March 11, 2009].
Posted by ကိုထွန်း at 16:03 No comments: